आफ्ना राजाको सपरिवार विनाश भएको ठाउँमा रेष्टुरेन्टमा बसेर कसरी खान सकिएला !| Nepal Marga
Friday, January 21, 2022 | शुक्रबार ०७ माघ, २०७८
आफ्ना राजाको सपरिवार विनाश भएको ठाउँमा रेष्टुरेन्टमा बसेर कसरी खान सकिएला !
नारायणहिटी दरबार परिसरमा रेस्टुरेन्ट खोल्ने बतास अर्गनाइजेसनको योजना संस्कृति तथा पर्यटन मन्त्री प्रेम आलेको हस्तक्षेपले केही समयलाई रोकिएको छ । तर यसको चर्चा सेलाएको छैन । नारायणहिटी दरबार राजा वीरेन्द्र शाहको सपरिवार विनाश भएको ठाउँ हो । रक्तपात भएको ठाउँमा भित्ता-भित्तामा गोलीको दाग अझै पनि छ । त्यहाँ सुरक्षा दिएर बस्नेहरूको भनाइअनुसार त्यहाँ रातको समयमा छटपटी भएर रोएको चित्कार अझै गुन्जिरहन्छ ।
नेपालीले अभिभावक गुमाएर कपाल खौरिएर वियोगमा डुबेको ठाउँ, हाँसीखेली परिवार बसेर राज्यका नीति निर्माण गर्ने ठाउँ, एकाएक मसानघाट भएको ठाउँ हो नारायणहिटी । अझै पनि गाउँ ठाउँबाट घुम्न जानेहरू आँसु झार्दै ‘कठै मेरो राजारानी’ भनेर न रोएको दिन हुँदैन । त्यहाँ जानेहरू, दरवार परिसरको अलिकति माटो घरमा लागेर राजारानीको सम्झना भनेर आफ्नो घरमा लिएर जाने गर्छन् ।
सामान्यतः यो कुरा त जसलाई पनि थाहा भएकै हो कि मान्छेको मृत्यु भएको ठाउँमा कुनै मन्दिर बनाइन्छ, कुनै वृक्ष रोपिन्छ । आत्म शान्तिका लागि पूजापाठ गरिन्छ । कुनै पनि धर्मले यो भन्दैन कि मान्छे मरेको ठाउँमा गएर खाऊँ, रमाऊ, रमाइलो गर्ने थलो बनाऊ भनेर ।
तर पैसा र कमिसनको नाममा आज केही बिचौलियाहरू यतिसम्म गिरिसके कि के गर्न हुन्छ, के हुन्न, धर्म के हो, पाप के हो सबै बिर्सिसके । मानवता के हो, देशको इतिहास के हो, सबै नैतिकता बेचेर खाइसके । अरू देशमा यस्तो संरचना संरक्षण गरेर सुरक्षाका साथ राखिन्छ । आफ्नो इतिहास भनेर विश्वलाई चिनाइन्छ । विडम्बना हाम्रो देशमा भने इतिहास कौडीको भाउमा बेचेर खाने प्रपञ्च रचिन्छ ।
संग्रहालय बनाइएको नारायणहिटी दरवारमा दैनिक हजारौंको सङ्ख्यामा मान्छे आउने गरेका छन् । टिकटबाटै त्यहाँ लाखौं आम्दानी हुन्छ । तर, संग्रहालयबाट उठेको रकम भने कहाँ जान्छ, थाहा छैन । दरबारको फोहोरावाल बगैंचा उजाड र झारले कुरूप छ । राजपरिवारले दैनिक पूजाआजा गर्ने मन्दिरहरू लेउ र धूलाले गर्दा मक्किसकेको छ ।
फराकिलो बगैंचा फूलैफूलले हरियाली हुने त्यो ठाउँमा बीच बीचमा पर्खाल लगाउँदै टहरा र भवन बनेर त्यो बगैंचा कुरूप बनेको छ । बगैंचालाई गणतन्त्र पार्कको नाममा झन् संरचना बिगार्ने काम भइरहेको छ । संरचना बिगार्दै नयाँ बनाउने नाममा सम्पत्ति भागबन्डा गरेजस्तो गरिरहेका छन् । शासनको वागडोर हातमा लिनेहरू, एकफेरा सोचाैँ त त्यो ठाउँमा तपाईंको परिवारको वंश नास भएको भए के तपाईं त्यस ठाउँमा कफी पिएर आनन्द मन लिएर बस्न सक्नु हुन्छ ?
✍️ एनी कुँवर
देशका १४ जिल्ला कोरोना संक्रमणको ‘रेड जोन’ मा
चुच्चे नक्साअनुसारको क्षेत्रफल सार्वजनिक नै भएन
हुस्सु र तुसारोका कारण तरकारी खेती गर्ने किसान हैरान
मेलम्ची खानेपानी आयोजनामा सरकारको बेवास्ता : काठमाडौंबासीले कहिले खालान् पानी ?
युरोपभर यसरी फैलियो संस्कृत भाषा
रगत चल्छ, जात चल्दैन !